Mallattoon Mootii Gonfoo Mataa irra Kaawwachuu Dha? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooMallattoon Mootii Gonfoo Mataa irra Kaawwachuu Dha?
Damee Boruu: Caamsaa 24, 2020
Kononeel Abiyi gaafa muudama isaa irratti dubbii yaroo godhu waan lamma ifatti dubbatee ture. Namni baayyeen garuu ijoo dubbii isaa sanaaf bakka guddaa waan laate hin fakkaatu. Inni duraa mul’ata haati isaa mootii akka tahu isaa himaa guddate. Kan lammaffaa kaayyoo Miniliki bakkaan gahuuf akeeka qabu utuu hin dhoksiin ifatti dubbate.
Gonfoo mataa irra kaawwachuu isaa hin agarre malee mul’ata haadha isaa wagga lamaaf shakkalaa guddaa gochaa jira. Anaaf Mootiin nama aangoo seeraa fi heera biyyaa ol qabu. Nama abbaa barbaade muudu. Nama abbaa barbaade guddisuu. Nama kan jibe aangoo irraa mulqee muxxuxxisu. Qabeenya biyyaa fi uummataa aabbaa barbaaduuf kan raabisuu fi badhaasu. Nama sodaatuu fi isa morkatu hidhuu fi ajjeesuu kan danda’u. Yaroo barbaadu waraana labsuuf aangoo kan qabu. Ijaarsa hin feene diigee kan isaaf tahu kan ijaaratu. Kan isaa fi samii jidduu aangoon biraa akka hin jirre fudhatu mallattoo mootii akka tahe mamii hin qabu. Akka hubannaa koo yoo tahe Kononeel Abiyi wagaa lamaan darban kana mul’ata haadha isaa bakkaan gahuuf jabbatee murannoo guddaan hojjechaa jira.
Goonfoo Mootii mataa irraa kaawwachuun waan daddaffin salphina guddaa itti fiduuf haa dhiisu malee bakka har’a bulchaa jiru Shagarii fi naannoo Amhaara keessatti fudhatama qaba. Uummata Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraatan keessa aadaa mootii kan leelisuu fi hawwu warra nafxanyootaa fi Habashaa akka tahan waan hubateef Uummata Oromoo aangoo irratti ol isa baase ganee warratti gale jira. Uummatni Oromoo mootiif hin guggufu. Gaxxeessa Habashaa Tamaanyi Beyenee jedhamu gaafa Kononeel Abiyi Waashington D.C. dhufee jilba jalatti kufee akka lafa dhugate agarree jirra. Haala kana fakkaatu Kononeel Abiyi ilma Oromo irraa argachuu hin danda’u. Aadaa Oromoo keesaa waan hin jirreef nan argadha laataa jedhee egachuu hin qabu.
Jeneral Jakamaa Kelloo, Jeneral Waaqoo Guutuu fi Haayilee Silaasee jidduu lolli deemaa ture mangudummaa kijibaan maqaa araaran lolli akka dhaabbatu godhe. Sana booda Jeneraal Waaqoo Gutuu fudhatee Haaylee Silaasee bira deeme. Jeneral Jaakamaan, “Jeraal Waaqoo Haayile Silaasee gadi jedhii dubbisii” jedhee jedhan. “Lakki, Oromoon Waaqa tokkichaaf qofaaf gadi jettI” jedhee didee jedhan.
Ilmaan nafxanyootaa fi warra Habashaa biratti attakkaroo tokko malee farfamaa waan amma har’a akka mootii tokko itti raawwataa jiru hojjechuuf ayyaana argatee jira. Waan inni gochaa jiru mul’ata haadha isaa bakkaan gahuufis tahee kaayyoo Minilki sana dhugoomsuuf hojjechaa jira jechu miti. Warri nafxanyootaa fi Habashaa ija isaanii qabataan isa of dura oofanii jaIajalaan saamachaa fi of ijaaraa deemaa jiru. Uummatni Impaayeera Itoophiyaa kana booda deebi’ee dhidhiitaa Amhaaraa jalatti bula jedhanii yaaduun illee abjuu dha. Ammumaa kaasanii bu’aa gurguddaa argachaa jiran isaan isaan mirqaansaa jira. Tigirootaa, Oromootaa, Sabaa fi Sab-lammi aangoo mootummaa keessaa jiran buqisanii bakka qabachaa jiru. Qabeenya Oromiyaa Wayaanee harkaa hafte daddaffiin saammachuun hojii ifati oofaa jiran ni dha. Ilmaan Oromoo hidhuu fi ajjeessuun kan bara Wayyaane ol daran dabbalee jira.
Gara yaada isaa lammaffaa yoon deebi’e jaalala Minilkiif qabuu jecha lafee isaa iyyuu boola keessa baasee utuu uummatni keenya beelaa fi gadadoon dhumaa jiru siidaa ijaaraaf jira. Falaasumma bututaa fi wal dhiitu falaasuma ida’amu jedhu tokko qabatee nama beekaa of fakkeessuu ittiin deemuu eegalee ture. Akeekni isaa silaa waanuma hawwii mootii tahuuf qabu jajjabeessuuf natti fakkaata.Yaada dogongoraa akkasii kanas kan fudhachuuf danda’u warra nafxanyootaa fi Habashaa qofa. Haalli kun lammaan ilmaan nafxanyaa fi Diqaallonni Habashaa riibuu dhugdaa Mootummaa isaa akka tahan isaan godhee jira. Mediyaan, aktivistoonni fi beektonni Habashaa biyyaa fi biyya alaa keessa jiran Kononeel Abiyi faarsaa oolanii bulu. Gargaarsa karaa hundaa gochaaf jiru. Haalli dhukkuba covid-19 kana wajjin aangoo irra akka yaroof ture isa gargaaruun ni mala taha.
Habashaan kan isa faarsan keessa inni guddaan “Oromummaa blleessa” jira yaada jedhuuf. Kana malee waraana Uummata Oromoo irratti bobbaasee Oromoota lafa irraa dugugee balleessaa jira jedhanii abdii guddaa irraa qabu. Dhugaa dha Oromoota hedduu hidhaa fi ajjeessa jira. Hojiin Kononeel Abiyi Oromummaa balleessuu caalaa ijaaraa fi qaraa jira. Oromoon bara baraan qabsa’e galma qabsoo utuu bakkaan hin gahiin Mootummaa Habashaaf dabarsee laatee galee rafa. Galatni WBO haa tahuu malee kana booda hin jiru. Qabsoon nama qara.Qabsoon uummata keenyas galama isaa ni gaha. Galmi isaa aangoo mootummaa humnan aboomuu dha. Muxxannoo fi kufaatii qabsoo darbe irra dhalootni har’a barachaa fi hubachaa dhufaa jira. Kana booda Oromoon qabsa’ee Habashoota aangoo dabrsee akka hin laatne morma koon kenna. Yoo waan an jedhu isinitti jabaate jecha jaal Marroo yaadaa dha. “Yoo Uummatni Oromoo dide bineesaa fi bosona Oromiyaan bilisa baasaa” jedhe. Kononeel Abiyi humna Waraanaa qabu hundaa itti bobaasu ille, gaafi tokko of irraa ittisaa jirra jedhee hin beeku. Yaroo hundaa “diina adabaa jirra “jedha.
Karaa biraa Mootummaan Konoeel Abiyi waraana kumaata hedduun leenjisee kokolaataa dhiba baayyeen lakkawamu waggaa lamaan darbaniif gara Booranaa, Gujii fi Wallagaa ergaa jira. Gaafa deeman waraana guutuu fudhanii deemu. Gaafa deebi’aan garuu qulaa deebi’u. Jaal Marroon waa’ee dhima kana gaaffatamee “bakka irraa dhufan biyyootti deebi’an” jedhee deebii gababa kenne. B. J. Birhaanuu Juulaa dhiyeenya kana yaroo midiyaaf deebii kennu, shiftoon kun nu dheessuu malee yaroon dhaabatanii nu lolanii hin jiruu jedhe. Warri Gujii keessa gara Sololoo naannoo daangaa Keeniyaatti baqatanii gammajii keessa jiru jedhe. Dheengada immoo Gujii keessatti Liyuu Poolisii Oromiyaa kudha lama ajjeessan jedhanii boo’u. Jaal Marroon gamoojii naanoo daangaa Sudaan dhokatee jiraata jechaa waraanni akkamitti naannoo Gimbii keessatti deemuu danda’a. Gimbii fi Sudaan wal daangessaa jiru jechuu dhaa? Sobuun silaas amala Mootummaa Impaayeera Itoophiyaa akka tahe gaaffii hin qabu.Bara midiyaan waan hundaa rekordii godhee qabatu kana keessa soba gurgudaa akkasii afuufuun bu’a maal qabaaf? Waraanni isaanii mindaa nyaachuuf du’aa jiru iyyuu abdii isaan irraa dhabee qawwee baatu gurguratee bada.
Yaadni aangoo Amhaara deebisuu fi kisaaraan faalasummaa ida’amuu kan mirkaneessu Kononeel Abiyi mootii Tigrayi fi Oromiyaa tahuu dadhabuu isaa ti. Tigrayi isa jalatti tasa hin bulle. Gara fuula duraas bulaa hin jirtu. Humni aangoo irraa isa buqqisee darbu humna Uummata Oromoo qofa. Yaroo darbe B. J. Kamal Galchuu “Uummatni Oromoo mootummaa kana yoo barbaade guyyaa sadii itti of irraa darbuu danda’a” kan jedhe dubbii haqaa ti. Humni Uummata Oromoo ititaa fi ijaaramaa dhufaa jira. Amma sana Kononel Abiyi Habashoota isaa wajjin haa wixxifatu. Uummatni Somalee, Sidamaa, Afaarii fi kan hafan hunduu isa wajjin hin jiran. Impaayeera Itoophiyaa keessatti mootumman kittillayoota uummachuun waan haaraa miti. Kittillayyotaa fi ayyaan ilaallatoota hedduu Oromoo keessaa argaa jirra. Maqaa isaanii warri du’ee haa waamatu malee maqaa isaanii waamuuf yaroo hin qabu. Warra akka Abbaa Duulaa, Nabiyuu fi Mustafee qabatee partii Impaayera Itoophiyaa ijaaradhe jedhee nama bookisu gowwaa akka Kononeel Abiyi arguun nama qaanesa.
Waan guddaa Kononeel Abiyi hojjete keessa OPDO diiguu fi faacaasu dha. OPDn xanachaa jireenya Uummata Oromoo taate balleessu ishoo galatoomi jenna. Garuu inni OPDO kan balleessaaa jiru Uuummata Oromoo gargaaruuf jedhee miti. OPDO maqaa ODP jedhu itti mogaasea akka hojjetuuf ilaale ture. Maqaa Oromoo qabaachuun ishee warra Habashaa biratti fudhatama ishee dowwate. Walii galla maqaa O qabdu kana haqee maqaa PPE (Prosperity Party of Ethiopia) jedhu ijaarate warra Habashaa gammachiisu filatee jira.
Uummatani Oromoo waan bareechee hubachuu qabu jira. Mooyummaan Naannoo Oromiyaa fi Caffeen Oromoo OPDO wajjin seeraa fi heera qabaniin bade jira. Yoo ijaarsi uummatni seeraa biyyi qabduun filate diigame qaamne ijarsa sana hunduu wajjin diigamee jira. OPDOn Uummata Oromoo itti xanacha haa taatu malee caasaa bulmataa, afaan ofiin barachuu, afaan ofiin seeramu, Oromiyaan dangaa bulmaata diriirstee jirti. Waan OPDOn amma gaafa diigamtuu qabatee turtee inni guddaan kana. Yoo WBON, Qarree fi Qeerroon Oromoo itti darbanii caasaa kana hin dhaallee Kononeel Abiyii fi Habashonni waan maqaa Oromoon jiru hundaa ni diiguuf deemu. Sana booda caasaa haaraa duwwaa irraa kaasanii ijaaruun salphaa hint ahu.
Akka warra Habashaa hawwan Kononeel Abiyi Oromummaa balleessaa hin jiru. Garuu isaan OPDOn farra Oromuumma tahuu adda baasan waan beekan natti hin fakkaatu. Namni maqaa Oromoo qabatee deemu hunduu farra Impaayeera Itoophiyaa jedhanii fudhatu. Maqaan Oromoo jedhu akka badu hawwu. Ammaan kana qabsoon bilisummaa Oromoo calalamaa fi qulqulaa’a deemaa jira. Fakkeesitoonni, ayyan-ilaallatoonni fi gufuun bilisummaa wal qabatan gar agalma isaanii hallayyaa itti deemaa jiru.
Uuummatni Oromoo bara baraan dhiitamuu, hidhamuu, saammaamuu fi boo’aa jiraachuu irraa waan qabu hundaan WBO wajjin dhabbatee hundee diina of irraa buqqisee gatuu qabu. Warri Oromoon tokkummaa hin qabu jedhee hidhii xuuxu, warra qabsoo kana irraa fagoo jiru yookan abdii kutate duwwaa dha. Ilmaan Oromoo wagga shantamaa ol Boranaa amma Waloo, Gidaamii amma Gaalmsoo waliin dhiiga isaan dhangalaasa turanii fi har’as itti jiran tokkummaa Saba Oromoo lafee fi dhiiga isaaniin jabeessanii ijaaranii jiru.Tokkummaan qabson biqilee qabsoon guddata malee oduu afaaniin miti. Uummatni waan barbaadu beeku hin gabroomu. Bilisummaan akka nu barbaachiisu hubannee jirra. Isas qawween arganna. Du’a covid-19 kumaata dhibaan fixxa jirtu utuu agarruu du’a sodaatnee garbummaa jalatti hin dhiitamnu.
Gadaan Gadaa Bilisummaa It!